Published on : July 07, 2009
"सम्झनाको छाँगाबाट मीठो इन्द्रेणी लहरीँदा तपाई देख्नुहुनेछ आहा ! ती मान्छेहरू ! उज्यालोको गीत गाईरहेका हुनेछन् तरुण तरुणले जीवनको भाका, शब्द सत्ताको स्वभाविक सक्ति । हो मायाबी फूलहरूले गाईरहेका हुनेछन् । प्रत्येक रात सीरुको पातबाट खसेको युवती आँसु कठै ! त्यो पनि सुन्दर दु:ख हुनेछ । र हुनेछ जिन्दगीको बलेसीबाट क्षितिजको घाम हेरीरहेको एक दु:खी गीतकार उहि तपाई हाम्रा पृय रामकृष्ण बान्तावा जो शब्दहरूको पहाड उभ्याएर जीवनको उचाइ उभीन चाहन्छन् ।"<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
रामकृष्ण बान्तावाको "आभा" एलबममा प्रदीप राज पाण्डेको मिठो बोलीले उद्घोषण भूमीकामा दिएको शब्दहरू हुन् यी । आभा मुकारुङलाई चर्चाको उचाइमा पुर्र्याउन बिशेष भूमिका खेल्ने र केही समय अघिसम्म रेडियो तथा एफ एमहरूमा निरन्तर बजिरहने उही "कता हिडेको कस्लाई खोजेको, भन न भन हे बिरानो परदेशी." बोलको गीत सर्बाधिक चर्चित थियो नेपालमा । गायिका आभा मुकारुङ्घलाई यही गीतका साथ स्टेज सोहरूमा देख्न पाइन्थ्यो उस बेला । लाग्छ रामकृष्ण बान्तावाले उनै गायिकाको लागि समर्पण गरेर एलबमको नाम पनि आभा नै राखि दिएको हो की ? किन पनि भने गितकार बान्तावाको गितहरू लाखौं श्रोताले सुने होलान् तर गितकार भने पछि मात्र चर्चामा आए जब उनको उपन्यास सघन तुँवालोको चर्चा चल्न थाल्यो ।
रामकृष्ण बान्तावा नेपाल र हङकङमा चर्चित नाम हो । जस्लाई हामी एक मिलनसार साहित्यकारका रुपमा चिन्दछौ । उनको सघन तुँवालो मात्र हैन अन्य तीन उपन्यास निस्किसकेका छन् भने दुई नाटक, एक कविता र एक आधुनीक गितहरूको संग्रह प्रकाशित भइसकेकोछ । स्मरणीय के छ भने उनको उपन्यास सघन तुँवालो एसिया २००० नामक संस्थाको सहयोगमा अंग्रेजीमा प्रकाशन भइसकेकोछ भने अन्य सात अन्तरार्ष्ट्रिय भाषामा छापिने तरखरमा छ । हुन त उनले कविता र थुप्रै मीठा-मीठा गितहरूको रचना गरिसकेका छन् तथापी बान्तावा मूलतः साहित्यकार त्यसमा पनि उपन्यासकार हून् । आदिबासी गितकार समाज नेपालबाट उत्कृष्ट गितकारको पुरस्कार हात पारि सकेका बान्तावाको भरखरै बजारमा निस्केको आदिबासी गिति एलबममा हामी हौं आदिबासी बोलको मीठो आदिबासी गित पनि समाबेश छ । तीन दर्जन ज्यादा गीतहरू रेकर्ड गराइ सक्नु भएका गीतकार तथा साहित्यकार राम कृष्ण बान्तावाको धुावा, आभा र आवाज गिती एलबम बजारमा आइसकेकोछ ।
तिमी भने परदेसको ठाउँमा
म तिमीलाई सम्झदै गाउँघरमा
कतै परदेशीप्रतिको स्नेह कतै जून जस्तै शितल मायाको कल्पना र बिनायोको धूनहरूको बर्णन छ आभाभित्रका गीतहरूमा । एउटा पुरुष गीतकारले नारी समबेदना र करुणालाई महसुस् गर्नु र त्यसलाई शब्दमा ब्यक्त गर्नु मामूली कुरा होइन । कतै धोका दिने मायालु प्रतिको गुनासो, कतै छोडी जाने मायालुलाई कोमल शब्दले गरेका गालीहरू साच्चै कारुणीक र दर्दभरिएका छन् । बान्तावाको प्रतिभा र भावनालाई मान्नै पर्छ ।
दुखै नदिइ छाल सरी उधै बहुँला
गोली भन्दा बोली धार थापी सहुँला
आभाभित्रका प्राय: गीतहरूले नारी मनभित्रका मायालु समबेदनाहरू र मायालु प्रति समर्पित भावनाहरूको प्रस्फुटन गरेका छन् । जस्तो कल्पनामा डोली चढी जाने मन, जुनीभरि साथ दिने बाचा, मायालुले बाटो भूल्दै छ की भन्ने तर्कना जस्ता नारी भावनाहरूको प्रस्तुती यस गीती संग्रहभित्रका सौन्दर्य हुन् ।
बान्तावा आफू किराँतीको छोरो भएर पनि नामलाई चाहिँ उनले हिन्दुकरण गरेकाछन् । रामायणमा उल्लेखित राम पुरुषार्थ थिए भने महाभारतका कृष्ण गोपीनीहरूको हिरो थिए । बान्तावा पुरुषार्थी त छन् नै तर आधुनीक गोपीनीहरूसितको मोहजालमा परे परेनन् / पारे पारेनन् यो उनैलाई थाहा होला । तर उनको गितमा भएको यी शब्दले भने उनप्रति शंका नै लाग्छ ।
माया लाउन पनि गाह्रो, लाए पछि झनै सारो
यो मायाको मामीलामा सारै झमेला
आकर्षक आभा एलबमको आवरणमा गायिकाको फोटो छ । बान्तावाका सटीक शब्द र भावुक गीतहरूलाई सुमधुर र कोकील गलाकी धनी उनै गायिका आभा मुकारुङले सजाएकीछिन् भने राजु सिंह, दिनेश बान्तावा, बशन्त मुकारुङ, सचिन सिंह, प्रबिण बराइली, पारस मुकारुङ र गायिका स्वयंको पनि यसमा संगीत रहेकोछ । बान्तावाका गितका शब्दहरूले श्रोताको मन भावुक बनाउँछ भने गायिकाको सुमधुर स्वरले मन्त्रमुग्ध पार्छ । खासगरि यस एलबममा नारी हृदय र समबेदनालाई उजागर गर्ने प्रेमील शब्दहरू सजिएका छन् ।
अन्तमा बान्तावालाई भविश्यमा पनि फेरि यस्तै मीठा सृजनाहरू पस्कने शुभकामना दिन चाहन्छु ।